Psa 92 | Mal1865 | STEP | Salamo. Tonon-kira hatao amin'ny andro Sabata. Tsara ny hidera an'i Jehovah Sy ny hankalaza ny anaranao, ry Avo Indrindra ô,
Fifaliana amin'Andriamanitra noho ny asany sy ny fitsarany marina
1 Salamo. Tonon-kira hatao amin'ny andro Sabata. Tsara ny hidera an'i Jehovah Sy ny hankalaza ny anaranao, ry Avo Indrindra ô, 2 Ary hanambara ny famindram-ponao nony maraina Sy ny fahamarinanao nony alina, 3 Amin'ny valiha tory folo Sy amin'ny feon-dokanga. 4 Fa ampifalinao amin'ny nataonao aho Jehovah ô; Ny asan'ny tananao no hihobiako.
5 Jehovah ô, akory ny halehiben'ny asanao! Lalina indrindra ny fisainanao. 6 Ny ketrina tsy mahafantatra izany, Ary ny adala koa tsy mba mahalala. 7 Raha mitsiry tahaka ny ahitra ny ratsy fanahy, Ary mamony ny mpanao ratsy rehetra, Dia izany no ho fandringanana azy mandrakizay. 8 Nefa Hianao, Jehovah ô, dia avo mandrakizay. 9 Fa, indreo, ny fahavalonao, Jehovah ô, Fa, indreo, ringana ny fahavalonao; Mihahaka ny mpanao ratsy rehetra. 10 Fa ny tandroko kosa asandratrao ho tahaka ny an'ny ombimanga; Mihosotra diloilo vaovao aho. 11 Ary faly ny masoko mahita ny amin'ny fahavaloko, Ary finaritra ny sofiko mandre ny amin'ny ratsy fanahy izay efa mitsangana hamely ahy. 12 Ny marina hamololona tahaka ny rofia ▼
; Hisandrahaka ▼
▼ Heb. Ho tonga lehibe
tahaka ny sedera any Libanona izy; 13 Efa nambolena tao an-tranon'i Jehovah izy Ka maniry eo an-kianjan'Andriamanitsika; 14 Mbola manorobona ihany izy, na dia efa antitra aza; Dofodofotra sy maitso izy, 15 Mba hanambara fa mahitsy Jehovah, Vatolampiko Izay tsy misy tsiny.